ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားရှင်းပြပါလိမ့်မယ် မီးသီးအမျိုးအစားများ ပုံမှန်အားဖြင့် ၄ င်းတို့၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များကိုအိမ်များသို့မဟုတ်ရုံးများတွင်အသုံးပြုကြသည်။
လောင်နေသည် အိမ်များတွင် ၁၈% နှင့်ရုံးခန်းများတွင် ၃၀% ရှိသည် အမျိုးအစားတစ်ခုရွေးချယ်ခြင်း မှန်ကန်သောအလင်းရောင် အသုံးပြုမှုတစ်ခုစီအတွက်၊ 20% မှ 80% စွမ်းအင်ကိုချွေပါ။
2.1 ၂။ LED
2.2 ၂ ။
2.3 ၃ ။
2.4 4. FLUOCOMPACTS ။
အကြောင်းမှာသူတို့သည်အခြားမီးသီးများကဲ့သို့ပတ်ဝန်းကျင်သို့ CO2 ကိုများများမထုတ်လွှတ်သဖြင့်၎င်းသည်အဖြိုက်နက်သို့မဟုတ်မာကျူရီလည်းမပါဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည်မီးသီးအားလုံး၏အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, 2009 ခုနှစ်ကတည်းကနောက်ပိုင်းတွင်ရှိခဲ့သည် စျေးကွက်ထဲမှဤမီးသီးအမျိုးအစားများကိုရုပ်သိမ်းခြင်းအရောင်တောက်ပမှုအားဖြင့်တူညီသောရလဒ်ကိုပေးနိုင်သောပိုမိုကောင်းမွန်သောဖြေရှင်းနည်းများကိုလမ်းပေးခြင်း၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့သည်အပူကိုမထုတ်လုပ်နိုင်၊ သံသရာအနည်းငယ်မျှနှင့်မျိုးပွားခြင်းမပြုလုပ်ကြပါ မှန်ကန်စွာအရောင်။
4. FLUOCOMPACTS ။
သူတို့ကအဖြစ်လူသိများကြသည် အနိမ့် comsumptionနာရီပေါင်းခြောက်သောင်းမှတစ်သောင်းကြားမှာအသုံး ၀ င်ပြီး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းပါတယ် ရိုးရာ homologues.
d) အမြင်တစ်ခုဗေဒအချက်အနေဖြင့်, ကျနော်တို့ပုံစံများကိုတက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကမ္ဘာလုံး, လှည့်လည်, လိမ်သို့မဟုတ်ဖယောင်းတိုင်မီးခွက်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » မီးသီးအမျိုးမျိုးကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း